"Lecheek Nutrition StimShot - 40 Servings, Mint""Kufungidzira kweChirongwa Chekutanga! Wedzerai Mishonga & Focus! "
StimShot yakasiyana nemamwe akawanda preworkouts pamusika. Stimshot ndiyo inotanga kushandura shanduro yekutanga preworkout umo iwe kungoisa poda ye preworkout pasi pomururimi rwako ndokuita kuti iparadze seminiti. Izvi zvakanaka kana iwe wakaneta nekugunzva preworkout chirwere usati warova gym. Ita zviri nyore STIM Shot pasi pomururimi rwako uye rega zvibvise. Iwe uchange wakagadzirira kuenda mumaminitsi e10!